Starwood dia nanambara ny fikasana hanangana hotely mihaja any Bermuda
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao » Starwood dia nanambara ny fikasana hanangana hotely mihaja any Bermuda
HAMILTON, Bermuda - Nanambara ny fikasana hanangana hotely mihaja ao Bermuda ny hotely hotely sy fialamboly amerikana iray izay nahatratra ny sehatry ny fizahan-tany lehibe ny krizy ara-toekarena manerantany.
Ny St. Regis Bermuda, tetikasan'ny Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc., no trano fandraisam-bahiny lehibe voalohany nisokatra teto an-drenivohitra amoron-dranomasina tao anatin'ny 50 taona mahery. Ny orinasa White Plains, any New York dia manantena ny hisokatra ny hotely avo lenta ao afovoan-tanànan'i Hamilton amin'ny 2013.
Ny drafitra ataon'ny orinasan-trano maritrano iray any Bermuda dia miantso ny trano fandraisam-bahiny hanolotra efitrano sy efitrano 140, trano fonenana 80, spa, trano fisakafoanana roa, fisotroana divay, trano famakiam-boky ary conservatory ambony tafo.
Tsy nambara ny fe-potoana ara-bola momba ny fifanarahana. Tsy nanaiky ihany koa ny orinasa raha tokony hanomboka ny fananganana.
Ity fanambarana ity dia vaovao miarahaba ity faritany manan-karena Atlantika Britanika ity, izay nahitana ny fizahan-tany nilatsaka 17 isan-jato tamin'ny 2008, raha oharina tamin'ny tamin'ny taon-dasa.
Ny praiminisitra Ewart Brown dia nilaza fa ny “St. Ny lazan'i Regis dia lasibatra amin'ny karazan-toerana itadiavantsika hamorona. ”
Ny mpitsidika 550,000 tamin'ny taon-dasa no vitsy an'isa hatramin'ny 2005. Ny tompon'andraikitra Bermudianina dia nilaza fa ny fahatongavan'ny sambo an-habakabaka sy sambo fitsangatsanganana dia samy nidina isa roa heny tamin'ny telovolana fahefatra, ary ny fandaniana nataon'ny mpitsidika dia nidina 22 isan-jato hatramin'ny $ 344 tapitrisa.
Ny trano fandraisam-bahiny St. Regis any Hamilton dia fananan'ny Par La Ville Hotel sy Residences Ltd., fiaraha-miasa eo amin'ny Unified Resorts Ltd. any Virginia sy Sagewood Investments LLC any New York.